Shiinaha Xulashada saxda ah ee macquulka ah iyo adeegsiga 5 aag ee soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha galoofiyaasha heerkulka sare | Joysun
Gacan-gashiyada u adkeysanaya heerkulka sare
Sida magacu tilmaamayo, waa galoofyo gaar ah oo badbaadada heerkulka sare oo gaashaaman oo loo adeegsado bey'ada heerkulka sare. Heerkul aad u saraysa oo isku dhafan faybar kiimiko ah oo shan farood ah calaacal iyo farta farta oo naqshadeysa maqaar duug u adkaysta, waxaad dooran kartaa galoofisyo kala duwan oo heerkulka sare iska caabiya iyadoo loo eegayo farqiga heerkulka ee taabashada gacanta Guud ahaan, galoofisyada iska caabiya heerkulka sare waxaa loo isticmaalaa heerkulka sare, shucaaca kuleylka ama jawiga ololka furan. Si looga hortago dhaawacyada gacanta, waa inaan u isticmaalnaa galoofisyada heerkulka sare galoofisyada si saxa ah ugana taxaddarnaa shilalka warshadaha.
Gacmo gashiyada heerkulka sare u adkaysan kara waxaa loo qaybin karaa afar nooc iyadoo loo eegayo alaabooyin kala duwan: asbestos galoofisyada heerkulka sare galoofisyada, galoofisyada heerkulka sare ee galoofisyada, galoofyada heerkulka sare ee galoofisyada iyo galoofyada galaaska sare leh ee galoofisyada. Marka loo eego waxqabadka gacmo gashiyada heerkulka sareeya, waxaa loo qaybin karaa: galoofisyada caadiga ah ee iska caabbida, galoofyada celiya heerkulka sare ee galoofyada, galoofisyada heerkulka sareeya ee antiistatic, galoofisyada heerkulka sare ee u adkaysta boodhka, boodh-la'aanta heerkulka sare ee caabbinta galoofyada, iyo anti-jarida gacmo-gashiyada u adkeysta heerkulka sare. Noocyada kala geddisan ee galoofyada heerkulka sarreeya waa in si wada jir ah loo xusho iyadoo lagu saleynayo bey'ad gaar ah waxayna u baahan tahay hal nooc oo ku habboon, si loogu ciyaaro saamigeeda, saamaynta ilaalinta ee wanaagsan.
Galoofisyada kulkulul ee heerkulka sare hada si balaaran ayaa loo isticmaalaa waxaana loo isticmaalaa warshado badan. Waxay noqotay wax soo saar lama huraan u ah ilaalinta shaqada deegaanka bey'ada heerkulka sare, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta dhacdooyinka shilalka warshadaha waxayna ilaalin karaan amniga iyo caafimaadka shaqaalaha iyo asxaabta. Gacmo gashiyada heerkulka sare u adkaysta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa bey'adaha ka shaqeeya heerkulka sare sida sibidhka, dhoobada, aluminium, dhirta korontada, kiimikooyinka kiimikada iyo alxanka korontada.
Shanta aag ee soo socda ayaa ku habboon galoofisyada kuleylka badan, oo kaa caawin kara inaad faham wanaagsan hesho.
Midka koowaad: elektaroniga iyo warshadaha kiimikada
Warshadaha elektaroniga iyo kiimikada waa inay doortaan galoofisyo heerkulkoodu sareeyo oo anti-static ah. Labadan warshad waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Guud ahaan, galoofisyada heerkulka sare ee gacmo gashi adkaysi leh ayaa looga baahan yahay inay lahaadaan astaamo anti-guuritaan wanaagsan. Haddii kale, korantada ma guurtada ahi waxay si fudud waxyeello ugu geysan kartaa alaabada oo xitaa waxay sababi kartaa qarax. Galoofisyada iska caabinta-heerkulka sare leh ayaa guud ahaan laga sameeyaa maadada aramid. Lakabka dusha sare wuxuu ka kooban yahay 99% fiber aramid oo lagu daray 1% silig tabinta. Waxay leedahay sifooyin wanaagsan oo ka hortag ah, waxayna ku fiican tahay iska caabbinta iyo iska caabbinta heerkulka sare.
Nooca labaad: qol nadiif ah iyo shaybaar
Aqoon isweydaarsiyo iyo sheybaarro aan lahayn boodh waa inay doortaan galoofisyada galoofisyada heerkulka sare leh ee aan lahayn boodhka. Labada aagba waxay u baahan yihiin galoofyo nadaafad sare iyo dabacsanaan leh, sidaa darteed galoofisyada heerkulka sare ee aan boodhka lahayn ayaa aad ugu habboon. Lakabka dusha sare wuxuu ka samaysan yahay daahan ama aramid filament fiber, markaa lakabka dusha sare wuxuu ka hortagi karaa boodhka iyo jibbaarada, wuxuuna u adkeysan karaa 180 darajo heerkul sare, 300 darajo oo dabacsanaan ah, iyo waxqabad aad u fiican.
Nooca saddexaad: birta, shubka, shaqaalaha foornada horteeda
Shaqaalaha metallurgy, shubka, iyo foornooyinka waa inay doortaan galoofisyada aluminium-gacmeedyada galoofyada u adkaysta kuleylka. Sababtoo ah bay'ada shaqada ee wershadani waxay leedahay shucaac kulul oo aad u xoog badan, illaa 800-1000 darajo, laakiin uma baahna inay si toos ah ula xiriirto walxaha heerkulka sare leh. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa aluminium alwaax leh galoofisyo heerkul sarreeya oo galoofisyo u adkeysan kara oo si wax ku ool ah uga tarjumi kara shucaaca kuleylka. Waxay si wax ku ool ah uga tarjumi kartaa 95% shucaaca kuleylka isla markaa isla markaa waxay u adkeysan kartaa 800 darajo oo ah dareeraha dareeraha heerkulka sareeya isla markiiba. Lakabka dusha sare ee galoofyada adkeysiga badan leh ee isdifaaca ayaan dhaawici doonin oo guban doonin. Lakabka gudaha waa gaaban yahay. Waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa gelitaanka kuleylka, waxayna siin kartaa isticmaalaha waqti uu kaga sooco gacmaha si looga fogaado gubashada heerkulka sare, taasoo si wax ku ool ah u ilaalineysa isticmaaleha.
Tan afraad: warshadaha muraayadaha
Warshadaha muraayadaha waa inay doortaan 300-500 digriiga aramid galoofisyada heerkulka sare leh. Warshaddan, iska caabbinta heerkulka sare ee galoofyada heerkulka sarreeya ayaa ah mid aad u hooseeya, iyo dabacsanaanta iyo waxqabadka ka-hortagga jarista ayaa aad u sarreeya. Sidaa darteed, way ku habboon tahay in la isticmaalo galoofyada heerkulka sare ee aramid galoofisyada iska caabiya. Gacmo-gashiyada Aramid ee heerkulka sare u adkaysta ma aha oo keliya inay yeeshaan caabbinta heerkulka sare ee wanaagsan iyo waxqabadka ka-hor-goynta, dusha sare ayaa jilicsan, lakabka gudaha ayaa raaxo leh, iyo dabacsanaanta galoofyada ayaa sidoo kale wanaagsan.
Shanaad: warshadaha sawir-qaadista
Warshadaha sawir-qaadista waa inay doortaan 500-darajo aramid galoofisyo heerkul sarreeya oo galoofis ah ama 650-darajo aramid oo isku-dhafan galoofisyada heerkulka sare leh. Warshaduhu waxay leeyihiin shuruudo aad u sarreeya oo loogu talagalay iska caabbinta iyo waxqabadka joogtada ah ee galoofyada heerkulka sare, iyo heerkulka xiriirku guud ahaan waa qiyaastii 500-650 digrii. Xulashada galoofyada heerkulka sare ee galoofyada iska caabbinta waxay ku tiirsan tahay iska caabbinta heerkulka sare iyo adkaysiga iska caabbinta. Lakabka kuleylka kuleylka leh, lakabka dusha sare iyo lakabka dharka ayaa si weyn u kordhin kara nolosha isticmaalka joogtada ah wuxuuna u shaqeyn karaa si joogto ah. Gacmo gashiyada Aramid ee heerkulka sare u adkaysta sidoo kale waa galoofisyada heerkulka sare ee iska caabiya ee ku jira warshadaha sawir-qaadista, xasilloonidoodana waa la damaanad-qaaday kadib adeegsi ballaaran.
Waxyaabaha kor ku xusan waa shanta meelood ee lagu dabaqi karo galoofisyada heerkulka sare galoofisyada u adkaysta, iyo noocyada galoofyada heerkulka sare ee adkaysi u leh ee ku habboon warshad kasta ayaa si faahfaahsan loo soo bandhigay. Kaliya xulashada saxda ah ee galoofyada heerkulka sare galoofisyada u adkaysta, iyo isticmaalka macquulka ah ayaa ka ciyaari kara saameyn wanaagsan oo difaac ah. Xulashada gaarka ah ee galoofisyada iska caabbinta heerkulka sare waxay sidoo kale u baahan yihiin inay tixgeliyaan heerkulka iyo waqtiga lala xiriirayo walxaha heerkulka sarreeya, sidaa darteed galoofisyada heerkulka sare ee la xushay ayaa ku habboon.